Kutsvaga chichava chinhu chinotevera chinoteedzerwa neGoogle kubva kuApple | IPhone nhau
Kutsvaga chichava chinhu chinotevera chinoteedzerwa neGoogle kubva kuApple
Google inoita kunge yakatsunga izvozvo Midziyo yeApple inogona kuve yavo "Yekutsvaga" network, yakafanana neiyo iyo Apple ichangobva kuvhura iyo mafaera ayo ese anobatsira kutsvaga.
Nhoroondo yeIOS uye Android izere nezvinhu zvinopfuura kubva pachikuva chimwe kuenda kune chimwe. Uye zvinoita sekunge Google iri kuzowedzera imwe poindi kune iyo nyaya pamwe nekubatanidzwa kwenetwork yakafanana ne "Tsvaga", Apple's nyowani yekutsvaga system uko mamirioni ePhones, iPads uye Macs kutenderera pasirese anogona kukubatsira iwe kuwana chero chishandiso yakarasika kana kubiwa kubva kuApple. Netiweki iyi inobvumira michina isina kubatana kweinternet kushandisa kubatana kwevamwe "vasinganzwisisike" zvishandiso kuti vazviwanire pamepu uye nekudaro kubatsira muridzi wavo kuzviwana.
Sekureva kweXDA-Vagadziri, iyo yazvino beta yeGoogle Play Services inosanganisira zvisaririra zvebasa rinodaidzwa kuti "Tsvaga Chidimbu Changu Network", umo "foni yako ichabatsira kutsvaga zvishandiso zvako nezvevamwe vanhu". Hatizive ruzivo rweiyi yemberi sevhisi, izvo zvishandiso zvinokwanisa kuzvishandisa uye neshanduro yeApple. Kana isu tichifunga nezvemhedziso manhamba, Android ine mukana wakakura pamusoro peIOS, asi kana tichifunga nezvezvishandiso zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni yeanoshanda system, iri imwe nyaya.
Izvi pasina mubvunzo ndeimwe yekuvandudzwa kukuru kwakaunzwa neApple mune zvazvino nyowani, uye kuti muIOS 15 ichaenderera kumberi nekwaniso yekutsvaga zvishandiso kunyangwe kubva kana pasina bhatiri. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max uye chero chimwe chinhu chatakaisa iyo AirTag, tinogona kudziwana paMepu yedu nemagadziriso enzvimbo kana anga achifamba, rubatsiro rwakakosha mukutsvaga zvinhu zvakarasika uye kuodza moyo avo vanofunga nezvekuchengeta zvisiri zvavo. Hazvishamise kuti Android inoda kuiisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Kutsvaga chichava chinhu chinotevera chinoteedzerwa neGoogle kubva kuApple
Chinhu chisingazivikanwe "bhagi" muIOS chinogona kuvharira wifi modem ye iPhone
Remangwana reAirPods raisanganisira kusanganisa maseru ekuongorora hutano hwedu